Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » Imihla emitsha ye-ITB Berlin: NgoMatshi 9-13 uhlala kunye nomntu
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
Ngo-2020 i-ITB yarhoxiswa kwiintsuku nje ezimbalwa ngaphambi kokuba umsitho othengisiweyo uqalise. eTurboNews wayexele kwangaphambili ukurhoxiswa, kodwa wayeseBerlin kwaye waqalisa ingxoxo ye-rebuilding.travel, kunye ne-PATA kunye neBhodi yezoKhenketho yase-Afrika. Ngo-2022 le ngxoxo iya kuqhubeka eBerlin - ngeli xesha kunye ne-ITB kulindeleke ukuba yomelele kwaye iphile.
UMesse Berlin, umququzeleli we-ITB uqinisekisile ukuba umboniso omkhulu wokurhweba kwishishini lokuhamba uya kubuya.
I-ITB icwangciselwe ukusuka nge-9-13 kaMatshi ngo-2022 eJamani iSixeko esiyiNkunzi
Ingqikelelo ye-G2 iya kusebenza. Kuthetha kuphela iindwendwe ezigonyiweyo okanye ezifunyenweyo okanye ababonisi abaya kuvunyelwa.
Ngo-2022 owona mboniso mkhulu wokuHamba eHlabathini ubuyile eBerlin, unomsitho wobuqu kunye neenkonzo ezibonakalayo zokwenza i-ITB Berlin ibe ngamava okwenyani kwihlabathi kwakhona.
Ezi ziindaba ezimnandi kwiiHotele zaseBerlin, abaqhubi beeteksi, iindawo zokutyela, iinqwelo-moya, kunye naye wonke umntu osehlabathini oziphilela kuhambo nokhenketho.
Luphuhliso oluhle lwelizwe lezokhenketho, kunye nokuzithemba okuyimfuneko ekubuyiselweni kwakhona kwecandelo,
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi yaqala eBerlin ngoMatshi ka-2020 ecaleni kwe-ITB erhoxisiweyo. “Sijonge ukudibana eBerlin ngo-2022 kusenzeka i-ITB.”, utshilo uJuergen Steinmetz, usihlalo, nomseki walo mbutho onamalungu kumazwe ali-128.
I-ITB yamisela ithoni ngokuthi:
"Ngenxa yemeko ekhoyo yolawulo, kuphela abathathi-nxaxheba abagonywe ngokupheleleyo okanye ababuyiselweyo baya kuvunyelwa ukuba bangene kwiminyhadala kude kube nesinye isaziso (umthetho we-2G)."
Ke ngoko, ngokwemeko yangoku yomthetho, ababonisi kunye neendwendwe ze-ITB Berlin 2022 kufuneka babe kutshanje okanye bagonywe ngokupheleleyo. I-EU yamkele isitofu sokugonya se-COVID-19 kwaye unike ubungqina boku ngesiqinisekiso sedijithali se-EU.
Ngoku ka UClaudia Dallmer, Umncedisi we-PR we-ITB, iindwendwe ezingezizo ze-EU kufuneka zilungile kunye nezatifikethi ezivunyiweyo okanye zinokuguqula ukudlula kokugonywa kumaxwebhu e-EU.
Iinkcukacha ezongezelelweyo ziya kuza, ngokutsho kukaNksz Dallmer.
Okwangoku, uMesse Berlin uthembisa kwiwebhusayithi yakhe:
Iinyanga zamva nje zibonise indlela ezibaluleke ngayo iintlanganiso zobuso ngobuso phakathi kwabantu. Imisitho efana neyethu yintliziyo yolu shishino. Njengababonisi kunye neendwendwe zorhwebo uphakathi kwesenzo. Ngo-2022 into enye iya kubaluleka: iintlanganiso zakho kufuneka zikhuseleke kwaye ziphumelele njengoko zinako.
Kula maxesha, iziganeko zifuna amanyathelo akhethekileyo okhuseleko kunye nococeko. Siyakuthembisa ukuba sigxile ekukhuseleni impilo yakho. Injongo yethu icacile: ukudala imeko-bume ngokukhuselekileyo nangobuchwephesha kangangoko ukwenza ukuba ishishini lokuhamba kunye neshishini lakho lichume kwakhona. Ukufezekisa oku sinxibelelana rhoqo nabasemagunyeni abafanelekileyo bempilo yoluntu kuMhlaba waseBerlin.
Unokufumana ngakumbi Apha malunga nemibuzo malunga nokhuseleko kunye nococeko.